Muuqaal: Sidee dadka Muqdisho usoo dhaweeyeen dib u helidda Internet-ka? - Caasimada Online
Home Warar Muuqaal: Sidee dadka Muqdisho usoo dhaweeyeen dib u helidda Internet-ka?
Muuqaal: Sidee dadka Muqdisho usoo dhaweeyeen dib u helidda Internet-ka?
Muqdisho (Caasimada Online) – Muddo 22 Berri ah waxaa Koonfurta Soomaaliya laga waayey aaladda Intenetka kadib markii uu go’ay qadka loo yaqana Viber Optic ee lasoo mariyo badda Hoosteeda.
Guud ahaan Magaalada Muqdisho iyo Koonfurta Soomaaliya ayaa muddo laga waayey isticmaalka Internetka inkastoo meelo aad u yar laga helayey qadka Settlet-ka kaasoo isna ahaa mid aad u culus isla markaasna qiimihiisu uu aad u sareeyey.
Hassan Top oo ah wariye aad looga yaqaan Magaalada Muqdisho, ayaa warbixin xiiso badan ka diyaariyey soo laabashada Internetka iyo sida ay dadka Muqdisho u arkaan Arrintaan.
Haddaba halkaan hoose ka daawo warbixintaan